Diyo post :: मैथिली भेसमा यस्तो देखिए धुर्मुस सुन्तली, हेर्नुहोस् भिडियो
मैथिली भेसमा यस्तो देखिए धुर्मुस सुन्तली, हेर्नुहोस् भिडियो - Diyo post
मैथिली भेसमा यस्तो देखिए धुर्मुस सुन्तली, हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं, १४ असोज । हास्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) मैथिली फिल्ममा देखिएका छन् । बाल विवाह र चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्धको फिल्म मुन्नीमा उनीहरु लखनभाई र लक्षुमनियाको भूमिकामा देखिएका हुन् । समाजसेवासँगै सन्देशमुलक फिल्म निर्माणमा लागेका धुर्मुस सुन्तलीको बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी फिल्मलाई दर्शकले निकै रुचाइरहेका छन् ।
युट्युबमा उक्त फिल्म करिब २ लाख पटक हेरीसकिएको छ । ज्योतिपछि धुर्मुस सुन्तलीले मैथिली फिल्म मुन्नी युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । सिराहाको लाहानमा छायाँकन भएको मुन्नीमा तराई क्षेत्रको दाइजोप्रथा र यसले निम्त्याउने चलीबेटी बेचबिखनको समस्यालाई देखाइएको निर्देशक सिताराम कट्टेलले बताएका छन् ।
फिल्ममा दाइजो दिनु नपर्ने भन्दै नचिनेको मान्छेलाई छोरी सुम्पिँदा आइपरेको जोखिमलाई देखाइएको छ । मैथिली भाषाका संवादहरु बोल्न कठिन रहेपनि सकेसम्म राम्रो गर्न खोजेको कुञ्जना घिमिरेले बताएकी छिन् । दीपक आचार्यको कथा रहेको मुन्नीमा धुर्मुस सुन्तलीसँगै दीपक आचार्य, महेन्द्र झा, रुपा झा, गौरी नारायण ठाकुर, दिनेश रसिया, सरबन यादब, प्रेमनारायण झा, गजेन्दर ठाकुरलगायको अभिनय छ ।
हेर्नुहोस् पुरा फिल्म
यस्ता थिए ‘बलियुड आइकन’ ओम पुरी २० पुराना तस्बिर हेर्नुहाेस्
एजेन्सी, २२ पुस । बलियुड ‘आइकन’को रुपमा विश्वभर प्रख्यात ओम पुरीको आज विहान निधन भएको छ । भारतीय चलचीत्र क्षेत्रका ...
१७ पुस, काठमाडौं । उदयमान मोडल एव गीतकार सूर्य लामाको ‘निभ्न लागेको दियो’ बजारमा ल्याएका छन् । आफ्नै रचना र ...
आफूले मनपरेको मान्छेको मृत्युपछि कपाल खौरिने को हुन् यी नायिका ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ५ पुस । मृत्यु जीवनको अनिवार्य परिघटना हो । संसारका धेरै गीत संगितहरु जीवन र मृत्युमा आधारित छन् । ...
‘हाम्रो गाउँको झिल्केले मेरो माइली भगाएपछि…’ (भिडियाेसहित)
काठमाडौं, ३ पुस । माया प्रेम र विवाहा जीवनको एउटा अंश हो । समाजमा कतिपय युवाहरुले आफूले मनपरेको मान्छेलाई मागेर ...
‘दि फेमस’ले पायाे सर्टिफिकेट, चलचीत्र हेर्न अभिभावक चाहिने !
काठमाडाैं, ३० कात्तिक । चलचीत्र दि फेमस हेर्नकाे लागि अभिभावक अनिवार्य गरिएकाे छ । फिल्ममा समावेश द्वन्द्वात्मक दृश्यले गर्दा 'दि ...
तरकारीवालीपछि सामाजिक सञ्जालमा भारतकी ‘नोटवाली’को तस्बिर भाइरल
काठमाडौं, २६ कात्तिक । सामाजिक सञ्जालमा एकपछि अर्को गर्दै चर्चा र सेलिब्रेटि बन्ने क्रम बढ्दो छ । पाकिस्तानका ‘चायवाला’ , ...
चलचित्र ‘द फेमस’को म्युजिक भिडियो यस्तो आयो,‘कस्तो माया’ (भिडियोसहित)
‘द फेमस’को म्युजिक भिडियो यस्तो आयो,‘कस्तो माया’ (भिडियोसहित) काठमाडौं, १३ कात्तिक । यहि कात्तिक १९ गते रिजिज हुने तयारीमा रहेको ...
‘द फेमस’ मार्फत नवनायिका सोनियाको आगमन (ट्रेलरसहित)
काठमाडौं, ७ कात्तिक । पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ नायिकाहरु आउने क्रम बढ्दोे छ । यसै क्रममा नवनायिका सोनिया ...
पार्वती राईले रविन शंकरलाई माया नदिँदा यस्तो लफडा
काठमाडौं, २ कात्तिक । गायक तथा गीतकार सरोज विरही तथा गायीका पार्वति भूजेलले ‘मायाको लाली जोवन’ नामक दोहोरी गीत बजारमा ...